Vaping ခေါင်းဆောင် Smoore က နည်းပညာ သစ် တွေကို Global Launch မှာ ပြသ – Pandaily
Jan 19, 2022, 16:13ညနေ 2022/01/19 23:32:07 Peter Catterall
Shenzhen အေျခစိုက္ ကမာၻ႔ ထိပ္တန္း အ ေငြ႕ ေငြ႕ ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္တဲ့ Smoore ကုမၸဏီဟာ အီလက္ထ ရြန္ နစ္ စီးက ရက္ နည္းပညာ နယ္ပယ္ မွာ လတ္တေလာ တိုးတက္ မႈေတြကို ထုတ္လႊင့္ ျပသ တဲ့ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို အဂၤါေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ က၎င်း၏ အသစ် “ Feelm Air ကို” ဒီဇိုင်း, အရသာ နှင့် အပူ features တွေ များအတွက် အကျိုးကျေးဇူး များ ကိုပေး, ကမ္ဘာ့စျေးကွက် အတွက် ရရှိနိုင် အပါး လွှာ ကြွေ ကွိုင် vape သီးတောင့် ဖြေရှင်းချက် ကိုကိုယ်စားပြု လိမ့်မည်ဟု ဆိုထားသည်။
အစဉ်အလာ ဆေးလိပ်သောက် ခြင်း၏ ကျန်းမာရေး အပေါ် ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုများကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ ၀ ိုင်း မှ အသိအမှတ်ပြု လာ ခြင်းကြောင့် အငွေ့ ပျံ စေသော စက်မှုလုပ်ငန်း သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း မြင့်တက် လာခဲ့သည်။သင္ယူ ျခင္း၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တွင်စုစုပေါင်း စျေးကွက် အရွယ်အစား မှာဒေါ်လာ ၃၄. ၈ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ လာမည့် ဆယ်စု နှစ်တွင် ဆက်လက် တိုးချဲ့ မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Smoore ၏ ထုတ်ကုန် အသစ် ၏အဓိက အင်္ဂါရပ် တစ်ခုဖွင့်ပွဲအင်္ဂါနေ့ သည် အရည် ကို အညီအမျှ အပူပေး ရန်နှင့် ရေနွေးငွေ့ ထုတ်လုပ်ရန် အတွက်အလွန် ပါးလွှာသော အလွှာ ခုနစ် လွှာ ရှိသော ရုပ်ရှင် ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ ၏အဆိုအရ ၎င်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်သည်။
စျေးကွက် စီးပွားရေး ပြောင်းလဲ မှုနှင့်အတူ Smoor သည် စက်မှုလုပ်ငန်း ကိုအလွန် ပါးလွှာသော ကိရိယာ များ သို့ကူးပြောင်း ရာတွင် ဦး ဆောင် ရန်ကြိုးစား နေသည်။ Ultra-thin devices များသည် စားသုံး သူများနှင့် ပို၍ လူကြိုက်များ သော်လည်း မကြာခဏ အားနည်း နေသည်။
ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်ပြည် တောင်ပိုင်းရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စင်တာ ဖြစ်သော ရှန်ကျန်း တွင်တည်ရှိပြီး ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အငွေ့ ပျံ မှုနှင့် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် များအကြား အဓိက ချိတ်ဆက်မှု တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အဓိက နိုင်ငံတကာ စျေးကွက် တွင်ပါ ၀ င် သူ များကိုလက်ခံ ခြင်းအပြင် စျေး ပေါသော အငွေ့ ပျံ စေသော ပစ္စည်းကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တင်ပို့ ခြင်းကို အထူးပြု သည့် ကုမ္ပဏီ ငယ် များသည်လည်း မြို့ပြ များတွင် များပြား လှ သည်။
မွာနိုဝင်ဘာ 2021တရုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များသည် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် များနှင့် အငွေ့ ပျံ စေသော ထုတ်ကုန်များကို ဆေးရွက်ကြီး လုပ်ငန်း၏ တည်ဆဲ ဥပဒေ မူဘောင် အတွင်းသို့ တရားဝင် ထည့်သွင်း ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏ ချဉ်းကပ် မှုကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Pandaily နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင် မှတ်ချက် တစ်ခုတွင် စက်မှုလုပ်ငန်း အတွင်းမှ ၀ င်ရောက် သူတစ် ဦး က စည်းမျဉ်း အပြောင်းအလဲ များသည် စျေးကွက် အာရုံစူးစိုက်မှု ဆီသို့ ဦး တည် သွား လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်း ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆင့်မြင့် ထုတ်ကုန် နည်းပညာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုလုပ်ဆောင် နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ များသာ ယှဉ်ပြိုင် နိုင် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက် တွင်, Smoore မကြာခဏ ၎င်း၏ ပြည်တွင်းရေး သိပ္ပံနည်းကျ အာရုံ အလေးပေးAtomizingနည်းပညာသည် တရား ၀ င် ပတ် ၀ န်းကျင် အသစ် တွင် ဆက်လက် တိုးချဲ့ နိုင် ပုံရသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ်သည် အငွေ့ ပျံ စေသော စက်မှုလုပ်ငန်း အတွက်အဓိက စံချိန်စံညွှန်း များ မူကြမ်းကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး စျေးကွက် အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်တက်လာ နိုင်သည်
ပြီးခဲ့သည့် နွေ ရာသီက ဟောင်ကောင်ရှိ IPO ကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့် ခဲ့ပြီးနောက် Smoore သည်ကမ္ဘာ့ အငွေ့ ပျံ မှု လုပ်ငန်းတွင် တန်ဖိုး အရှိဆုံး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာသည်။ လက်ရှိ စျေးကွက် တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၂၈ ဘီလီယံ ခန့်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ၏ ၁၈. ၉% ရှိသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် Smoor ၏ရှယ်ယာ သည် ၁. ၅၀% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ထုတ်ဝေ သည့်အချိန်တွင် ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၃၆. ၀၅ (ဒေါ်လာ ၄. ၆၃) သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
အက်တမ် နည်းပညာကို အရည် အငွေ့ ပျံ စေသော ကွိုင် များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဤ ကြွေထည် ပုံစံကို FEELM မှ တီ ထွ င်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အငွေ့ ပျံ စေသော စက်မှုလုပ်ငန်း ခေါင်းဆောင် Smoore ၏နည်းပညာ အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်သည်။